Dhaqanka shirkadda - GUANGDONG PENGWEI FINE CHEMICAL CO., LTD
Dhaqanka shirkadda waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay nafta hal shirkad taasoo tusin karta hadafka iyo ruuxda shirkadda. Sida hal-ku-dheggeenu u leeyahay 'Pengwei Persons , Pengwei Souls'. Shirkaddayadu waxay ku adkaysanaysaa bayaanka hadafka ee ilaalinaya hal-abuurka, kaamilnimada. Xubnahayagu waxa ay ku dadaalayaan horumar iyo in ay la socdaan kobaca shirkadda.
Inta badan ma jirto calaamad ka wanaagsan oo ku saabsan dhaqanka ixtiraamka leh ee shaqada marka loo eego sida dadka loola dhaqmo asxaabta yaryar, yar yar. Shirkaddayada, waxaanu ixtiraamaynaa qof kasta oo ka tirsan shirkaddaada meel kasta oo aad ka timid, waa maxay afkaaga hooyo, waa maxay jinsigaaga, iwm.
Waxaan u shaqaynaa asxaab ahaan sidoo kale asxaab ahaan. Marka aan shaqada ku jirno, waanu wada-shaqeyna, caawinaa si aan uga gudubno dhibaatooyinka wadajirka ah. Markaan shaqada ka maqannahay, waxaan galnaa garoonnada ciyaaraha oo aan wada ciyaarno. Mararka qaarkood, waxaan ku qaadannaa safar saqafka. Marka xubnaha cusub ay soo galaan shirkadda, waxaan qabanaa xaflad soo dhaweyn ah waxaana rajeyneynaa inay dareemaan inay guriga joogaan.
Waxaan u aragnaa inay muhiim tahay in la furfuro. Qof kasta oo ka tirsan shirkadu wuxuu xaq u leeyahay inuu bixiyo talooyinkiisa. Haddii aan hayno talooyin ama jawaab celin ku saabsan arrinta shirkadda, waxaan la wadaagi karnaa fikradahayaga maamulahayaga. Dhaqankan, waxaan u keeni karnaa kalsooni nafteena iyo shirkadda.
Dhiirrigelintu waa awood lagu siiyo shaqaalaha rajo. Hogaamiyuhu waxa uu dhiiri galin doonaa marka aanu bilawnay wax soo saarka maalin kasta. Haddii aan khalad samayno, waa nala dhaleeceyn doonaa, laakiin waxaan u maleyneynaa in tani ay sidoo kale tahay dhiirigelin. Mar haddii qalad dhaco waa in aan saxno. Sababtoo ah aaggayagu wuxuu u baahan yahay kormeer, haddii aan taxaddar la'aanno, markaa waxaan u keeni doonaa xaalad xun shirkadda.
Waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka inay sameeyaan hal-abuurnimo oo ay fikradahooda dhiibtaan, qaataan kormeer wadajir ah. Haddii ay si fiican u soo baxaan, waxaanu siin doonaa abaal-marin waxaanan rajaynaynaa dadka kale inay horumar sameeyaan.